ပြီးပြည့်စုံသောအသံသွင်းရန်မည်သည့်မိုက်ခရိုဖုန်းကိုရွေးချယ်ရမည်နည်း Gadget သတင်း
Louis padilla | | ပစ္စည်းများ, ရုပ်ပုံနှင့်အသံ
မိုက်ခရိုဖုန်းကိုရွေးတာကမလွယ်ဘူး။ နည်းပညာနှင့်ဆက်စပ်သောအရာအားလုံးတွင်မကြာခဏဖြစ်လေ့ဖြစ်သကဲ့သို့အဆုံးတွင်စျေးပေါခြင်းသည်များသောအားဖြင့်စျေးကြီးပြီး၎င်းသည်သင်၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းအာမခံချက်မပေးချေ။ မိုက်ခရိုဖုန်းကမ်းလှမ်းမှုသည်ကြီးမားပြီး၊ အမျိုးမျိုးသောမိုက်ခရိုဖုန်းများသည်အချို့သောလိုအပ်ချက်များနှင့်အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်သော်လည်းအခြားသူများအတွက်မသင့်တော်ပါ။ dynamic သို့မဟုတ် condenser? XLR သို့မဟုတ် USB လား။ Omnidirectional သို့မဟုတ် Cardioid? ဒီဆောင်းပါးမှာမင်းတို့ပြမယ် ဘယ်လိုမိုက်ခရိုဖုန်းအမျိုးအစားမျိုးလဲ၊ ဘယ်အခြေအနေမှာသူတို့နဲ့အသင့်တော်ဆုံးလဲဤနည်းအားဖြင့်သင်အမှားလုပ်မိခြင်းနှင့်သင်ပိုက်ဆံဖြုန်းနေသည့်အရာတို့ကိုသိခြင်းစသည့်အန္တရာယ်များနည်းပါးစွာရွေးချယ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပိုမိုဖြုန်းတီးခြင်းသည်သင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိလိမ့်မည်ဟုအမြဲမဆိုလိုပေ။
1.1 USB သို့မဟုတ် XLR
1.2 Omnidirectional သို့မဟုတ် directional
1.3 dynamic သို့မဟုတ် condenser
ဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ USB သို့မဟုတ် XLR ။
ယင်း၏ directionality အရ: omnidirectional သို့မဟုတ် directional ။
အမြှေးပါးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်။ ပြောင်းလဲနေသောသို့မဟုတ် condenser ။
USB သို့မဟုတ် XLR
များသောအားဖြင့်သင်မှတ်တမ်းတင်သောကမ္ဘာတွင်စတင်သောအခါသင်သည် USB မိုက်ခရိုဖုန်းများကိုအရင်ကြည့်ပါ။ သူတို့ဟာစျေးပေါပြီးသင့်အတွက်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေကိုမ ၀ ယ်ဘဲသင်လိုအပ်သမျှကိုပေးပါတယ်။ sUSB မိုက်ခရိုဖုန်းများသည်သင်၏ကွန်ပြူတာနှင့်သူတို့ချိတ်ဆက်ထားသောကေဘယ်လ်ကြိုးဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီး၎င်းတို့နှင့်သင်စတင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်၊ ဤမိုက်ခရိုဖုန်းအမျိုးအစားကိုဆုံးဖြတ်သူတိုင်းသည်နောက်ဆုံးတွင် XLR သို့ခုန်ကူးလိမ့်မည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် USB mics သည်တည်ဆောက်မှုအရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသည်။ အနည်းဆုံးစျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်းများရှိသည့်အပြင်၎င်းတို့နှင့်သင်ရရှိသောအသံသည်လည်းအရည်အသွေးနိမ့်သည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်မိုက်ကရိုဖုန်းများဖြစ်သောကြောင့်လိုအပ်ချက်များစွာမရှိဘဲရံဖန်ရံခါအသုံးပြုရန်သင့်တော်သည်။
XLR မိုက်ကရိုဖုန်းများသည်ပုံစံရွေးချယ်ရာတွင်များစွာသောရွေးချယ်စရာများကိုများမကြာခဏပေးလေ့ရှိသည် မိုက်ခရိုဖုန်းကိုယ်နှိုက်သည်များသောအားဖြင့်စျေးကြီးသော်လည်း (အရာအားလုံးရှိသော်လည်း) ၎င်းကိုသင့်ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများစွာလိုအပ်သည်။ သင်မိုက်ခရိုဖုန်းကို USB မှတဆင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်ရောနှော console တစ်ခုသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးရောစပ်သည့် console ထက် XLR ပို၍ ရိုးရှင်းသည်။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကငါသည်သင်ရောနှောသူ၏သုံးသပ်ချက်ကိုပေးခဲ့သည် Behringer Q802USB စျေးနှုန်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တို့အတွက်ဒီမိုက်ကရိုဖုန်းအမျိုးအစားများနဲ့ပေါင်းစပ်ဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်သင်သည်မိုက်ခရိုဖုန်းကိုပြောင်းလဲလိုပါကကျန်ကိရိယာများကိုဆက်လက်ထားရှိစဉ်၎င်းကိုအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်ပြီးသင်ရရှိမည့်အသံအရည်အသွေးမှာလည်းပိုမိုကောင်းမွန်လိမ့်မည်။
Omnidirectional သို့မဟုတ် directional
သူတို့ကအသံဖမ်းယူပုံပေါ် မူတည်၍၊ omnidirectional (အားလုံးလမ်းညွန်ထံမှ) သို့မဟုတ် directional ။ ဤအရာများထဲတွင်အသုံးအများဆုံးက "cardioids" ဖြစ်ကြသည်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအသံကို“ နှလုံး” အဖြစ်ဖမ်းယူပြီးရှေ့ရှေ့မှာမှန်တာကို ဦး စားပေးပြီးနောက်ကွယ်မှာရှိတဲ့အရာကိုလျစ်လျူရှုလို့ပါ။
Omnidirection mics သည်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအရာအားလုံးကိုဖမ်းယူနိုင်သည့်အတွက်များစွာသောအသံအမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုတိတိကျကျလိုသည့်အခါ၎င်းတို့သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်နားထောင်ရုံဖြင့်ကားဖြတ်သန်းသွားသောကားများကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ဘဲ၊ cardioid micro ကိုရွေးရမည် ငါတို့ရဲ့အသံကိုသာကောက်ယူလိုက်ပြီးကျန်တာတွေကိုငြင်းပယ်လိုက်တယ်။
dynamic သို့မဟုတ် condenser
Dynamic မိုက်ကရိုဖုန်းတွေဟာအားကောင်းနေတယ်၊ ​​သူတို့ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမလုပ်မိရင်သူတို့တစ်သက်တာလုံးတည်တံ့လိမ့်မယ်။ သူတို့ကစိုထိုင်းဆကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်အလုပ်လုပ်ရန်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာဖြစ်ပြီး၊ ပုံပျက်ခြင်းမရှိဘဲပမာဏများစွာကိုကောင်းစွာကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိဆူညံသံများကိုအထိခိုက်မခံနိုင်သော်လည်း“ pops” ကိုထုတ်လုပ်ရန်အလွန်နည်းပါးသည်။ ။
အသံချဲ့စက်များသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသော်လည်းကောင်းမွန်သောအခြေအနေများတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသလောက်ကြာရှည်နိုင်သည်။ သူတို့ကအရမ်းကိုထိခိုက်လွယ်ပြီးဆူညံသံအမျိုးမျိုးကိုဖမ်းယူထားတယ်။ ဒါကြောင့်စတူဒီယိုတစ်ခုမှာနံရံတွေကပ်ပြီးတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့အသံသွင်းထားရင်ရလဒ်ကောင်းလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်သင့်အခန်းထဲမှာယေဘုယျစည်းမျဉ်းအတိုင်းလုပ်ရင်မင်းတို့ကခေါင်းကိုက်စေလိမ့်မယ်။ အပြင်ကနေပြီးတုန်ခါမှုတွေ၊ ပဲ့တင်သံတွေ၊ ဆူညံသံအမျိုးမျိုးကိုဖမ်းယူနိုင်မှာပါ။
Samson SAGO Mic သည် USB မိုက်ကရိုဖုန်းကိုကမ်းလှမ်းနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် condenser microphone ဖြစ်ပြီးဘေးဘက်ရှိ switch တစ်ခုမှတဆင့် omidirectional သို့မဟုတ် cardioid ဖြစ်နိုင်သည်။ အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်း (ယူရို ၃၅ မှ ၄၀)၊ အလွန်ရိုးရှင်းသောကိုင်တွယ်မှုနှင့်သင့်အတွက်အမြဲသယ်ဆောင်ရန်အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် USB ကြိုးတစ်ခုတည်းက၎င်းအားစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုလုံလောက်စွာပေးစွမ်းနိုင်ပြီး၎င်းသည်အသံကိုစောင့်ကြည့်ရန်နားကြပ်ဖြင့်ထုတ်လွှတ်သည်။ သို့ရာတွင်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောအသံအရည်အသွေးသည်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းငယ်များနှင့်အတူလိုက်ပါရန်လုံလောက်သော်လည်းအကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုရရှိရန်မဟုတ်ပါ။ သင်၌အမေဇုံတွင်ယူရို ၃၃ ဖြင့်ရနိုင်သည်.
Podcasting အတွက်အကြံပြုတဲ့အပြာရောင်မိုက်ကရိုဖုန်း YETI မိုက်ခရိုဖုန်းသည်ကြာမြင့်စွာကတည်းကရှိခဲ့သည်။ အလွန်မြင့်မားသောစျေးနှုန်း (၁၂၅-၁၅၀ ယူရို) နှင့်၎င်း၏ USB ဆက်သွယ်မှုသည်၎င်းကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်တတ်နိုင်သောအရာတစ်ခုကိုရှာဖွေနေသူများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့အမြှေးပါး condenser မိုက်ခရိုဖုန်းဖြစ်တယ်၊ ဆိုလိုတာကသင့်ရဲ့အခန်းထဲမှာနောက်ဆုံးပျံသန်းနေတဲ့ဖမ်းမိလိမ့်မယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများ (omnidirectional, cardioid, bidirectional ... ) ကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်နိုင်သော်လည်း၎င်းကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်တပ်ဆင်ထားသည့်ခန်းများ၌အသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။ Amazon မှာယူရို ၁၂၆ နဲ့ရနိုင်ပါတယ်.
ရလဒ်ကောင်းများနှင့်ရရှိနိုင်သောစျေးနှုန်းချိုသာသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ Behringer Ultravoice XM8500 ဖြစ်သည်။ အခြေအနေအများစုအတွက်လုံလောက်သောထက်ပိုမိုသော XLR ဆက်သွယ်မှုပါ ၀ င်သည့်ပြောင်းလဲနေသော cardioid မိုက်ခရိုဖုန်း။ ကျွန်ုပ်သည်ငါဖော်ပြခဲ့သောရောနှောခြင်းနှင့်အသုံးပြုသောသူဖြစ်ပြီး၊ အခန်း၏ပဲ့တင်သံကိုမရိုက်ပဲရလဒ်မှာအတော်လေးကောင်းသည်။ ဤ Mics အမျိုးအစားများနည်းတူ popping သည်ပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းသင့်တော်သောအကွာအဝေးတွင်ပြောခြင်းသို့မဟုတ် filter တစ်ခုဝယ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုအနိမ့်ဆုံးသို့လျှော့ချနိုင်သည်။ Amazon ကိုယူရို ၁၉.၉၀ ဖြင့်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသည် အရာကသင့်ရဲ့အသံသွင်းစတင်ရန်စံပြ option ကိုစေသည်။
အသံလွှင့်ရုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ Shure SM58 မိုက်ခရိုဖုန်းဖြစ်သည်။။ ယခင်တစ်ခုကဲ့သို့ပင်၎င်းသည် dynamic, cardioid နှင့် XLR ဖြစ်သည်။ ရရှိသောအသံအရည်အသွေးသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအမေရိကရှိ podcasters များ၊ ရော့ခ်ဂီတအဖွဲ့များနှင့်တရားဟောဆရာများပင်ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့၎င်း၏စျေးနှုန်းငါရောက်ရှိ, ငါဖော်ပြခဲ့တဲ့ယခင်မော်ဒယ်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည် အမေဇုံအပေါ်€ 125.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » ပစ္စည်းများ » ပြီးပြည့်စုံသောအသံသွင်းရန်မည်သည့်မိုက်ခရိုဖုန်းကိုရွေးချယ်ရမည်နည်း
ယူရို ၃၀၀ အောက်မကျသော ၀ ယ်ယူနိုင်သောစမတ်ဖုန်း ၆ လုံးနှင့်သင့်အားစိတ်ပျက်စရာမရှိပါ
သောကြာနေ့အနက်ရောင်၊ အထူးလျှော့စျေး, ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်ပိုပြီး